ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ အတွက် အလှူငွေများ ပေးအပ်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း များ မှ တာဝန်ရှိ သူများအား သီးခြားစီ တွေ့ဆုံ Post date: Fri, 08/26/2016 - 21:17 မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးက လှူဒါန်းငွေ ကျပ်သိန်း (၁၀၀) အားလည်းကောင်း၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေ၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ် သဘင် အစည်းအရုံးက လှူဒါန်းငွေကျပ်(၈.၅)သိန်းအား လည်းကောင်း ယနေ့ နံနက် ပိုင်း တွင် နေပြည်တော်ရှိ
Read more ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံကျင်းပရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ Post date: Fri, 08/26/2016 - 21:11 ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ -(၂၁)ရာစုပင်လုံကျင်းပရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ၏ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို ယနေ့မွန်းလွဲ (၁)နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။
Read more မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၏ Multi Channel Playout System တွင် ရုပ်သံလိုင်း ထည့်သွင်း ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လိုသူများ အနေဖြင့် EOI တင်သွင်းရာ၌ ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ Post date: Fri, 08/26/2016 - 20:52 မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၏ Multi Channel Playout System တွင် ရုပ်သံလိုင်း ထည့်သွင်း ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လိုသူများ အနေဖြင့် EOI တင်သွင်းရာ၌ ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ
Read more ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ Minister of State ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အား တွေ့ဆုံ Post date: Fri, 08/26/2016 - 20:28 ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ Minister of State Mr.Roderick James Nugent Stewart ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံးဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
Read more ၂၁ ရာစုပင်လုံမှ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု သို့ Post date: Fri, 08/26/2016 - 20:16 Read more ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် အခြေခံ ပင်လုံညီလာခံ Post date: Fri, 08/26/2016 - 20:01 Read more ပေါင်းစည်းမှု၏ စွမ်းအား Post date: Fri, 08/26/2016 - 20:00 Read more 1234567 ဌာနများ
ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ အတွက် အလှူငွေများ ပေးအပ်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း များ မှ တာဝန်ရှိ သူများအား သီးခြားစီ တွေ့ဆုံ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံကျင်းပရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၏ Multi Channel Playout System တွင် ရုပ်သံလိုင်း ထည့်သွင်း ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လိုသူများ အနေဖြင့် EOI တင်သွင်းရာ၌ ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ Minister of State ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အား တွေ့ဆုံ ၂၁ ရာစုပင်လုံမှ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု သို့ ကြေညာချက်
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန အလှကုန်ဆိုင်ရာ အသိပေး ကြေညာချက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် သတင်းအေဂျင်စီလုပ်ငန်းများအား ခွင့်ပြုပေးမှုအခြေအနေ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း more <?php global $base_url; ??>
ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ အတွက် အလှူငွေများ ပေးအပ်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း များ မှ တာဝန်ရှိ သူများအား သီးခြားစီ တွေ့ဆုံ ... ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံကျင်းပရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ ... မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၏ Multi Channel Playout System တွင် ရုပ်သံလိုင်း ထည့်သွင်း ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လ ...
မန္တလေး တက္ကသိုလ်တွင် စာရေးဆရာမဂျူးမှ (၂၁)ရာစုပညာရေး ရည်မှန်းချက်များ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပ
လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း မြို့နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်သူ အဖွဲ့အစည်း ပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအဝေး
Thailand Philharmonic Orchestra အဖွဲ့ ထိုင်းသံရုံးတွင် ဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ Read more ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုဝန်ကြီးများ၏ မိန့်ခွန်းများ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး Read more 267
The Global New Light Of Myanmar <?php global $base_url; ??>